Ị ga-ama eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka ị nwere onwe gị: ebe a bụ nkọwa banyere ebo 12 nke Israel ugbu a na-emegbu ndị Western
Site na: KongoLisolona: June 15, 2019 00: 40 Enweghị asịsa
Agbụrụ iri na abụọ ma ọ bụ ụmụ Jekọb iri na abụọ, site na oge ruo taa site na mmụkọ na ọtụtụ ọmụmụ, ha bụ mba ndị anyị ga-ekwu maka ha n'okpuru ebe a, ha bụ ndị a bụ ụmụ Jizọs ndị Jizọs mere. ndumodu n’ime Matiu 15:24, E zigara m naanị atụrụ furu efu nke ụlọ Israel.
Ruden - Spain
Simeon - France
Levi - Switzerland
Juda - Israel
Nepthalhia - .tali
Gad - Portugal
Asha - Jamanị
Isaka - Gris
Zebulun - Rome
Ifrem - United Kingdom / Great Britain
Benjamin - Belgium
A ka ga-ajụ ajụjụ a, kedu mba Afrịka dị n'etiti agbụrụ iri na abụọ a? Nwa ojii ka ị ga - eji nke a na - akpọ ehi ụra chebe, “tetagị! »
Kedu ihe bụ ọchịchọ mmekọahụ nke Adam? Amaara m na okpukpe Jesulaster, Mohammedan, na okpukpe ndị Juu anaghị enwe mmasị n’ajụjụ ndị na-aga n’ihu ịchọ eziokwu ahụ n’ihi na ha kwenyere na ha nwere ya n’ebughị ụzọ chọọ ya.
Ọkt28 07: 20